Mhepo nyowani inopa uye bvisa mweya wekare kubva mukamuri neimwe nzira
Nyore kuisa kuburikidza yemukati madziro ane gomba dhayamita kubva 160-170mm
Auto shutter inogona kudzivirira zvipembenene kupinda uye mweya unotonhorera uchiyerera uchidzoka kana iyo unit yamira
Imomo hood inogona kudzivirira kunaya kwemvura kumashure uye shiri nesting
Iyo inodzoserwa axial fan ine EC mota. Nekuda kweiyo EC yakashandiswa
tekinoroji fan inoratidzwa ine yakaderera simba rekushandisa uye chinyararire mashandiro. Iyo fan mota ine yakabatanidza kupisa
kupisa kwekudzivirira uye bhora mabhegi ehupenyu hwakareba hwebasa.
Iyo yepamusorosoro zvedongo simba rekuunganidza pamwe nekuvandudzwa
kunyatsoshanda kusvika pa97% inovimbisa kubvisa mweya kupisa kupora kwekudziya kwekugovera mweya kuyerera. Nekuda kwenzvimbo yemaseru iyo
Regenerator yakasarudzika ine hombe yekubata mweya pamusoro uye yakakwira
kupisa-kuitisa uye kupisa-kuunganidza zvivakwa.
Iyo ceramic regenerator inorapwa neanthibhakitiriya inogadzira iyo inodzivirira hutachiona kukura mukati meiyo regenerator yesimba. Iyo inorwisa mabhakitiriya inogara kwemakore gumi.
Iwo maviri akasanganiswa mweya mafirita ane akazara mafirita ekuyera G3 inopa kugovera uye kubvisa mweya filtration. Iwo mafirita anodzivirira kupinda kweguruva nezvipembenene mumhepo yekugovera uye kusvibiswa kweiyo mhepo inofefetedza zvikamu. Iwo mafirita anewo antibacterial kurapwa.
Sefa yekuchenesa inoitwa neyekuchenesa kana mvura kufashaira. Iyo antibacterial solution haina kubviswa. F8 firita iri inowanikwa seyakanyanya kurairwa zvekushandisa, asi kana yaiswa, iyo inoderedza kuyerera kwemhepo kudzika kusvika makumi mana m / h.
Mhepo yekufema Mode: Iyo ventilator inomhanya mumhepo inoburitsa kana yemhepo nzira yekumhanyisa ine seti kumhanya. Kana paine mashandiro ekushanda kwemaviri akabatana nemhepo inofema imwe yuniti inoshanda mune yekugovera modhi uye imwe yacho mune yekuburitsa modhi.Regeneration Mode:Iyo ventilator inomhanya mumatanho maviri, masekondi makumi matanhatu neshanu, kupa kupisa uye hunyoro kumutsiridzwa.
Iyo inodzoserwa mashandiro emhepo inofambisa simba inogonesa simba uye inoumbwa nematanho maviri:
Iyo yakasviba mweya inodziya inotorwa kubva mukamuri uye ichipfuura iyo zvedongo simba regenerator, iyo recuperator inozotora kupisa nehunyoro. Mumasekonzi makumi matanhatu neshanu, sezvo regenerator yesimba ichidziya, mweya wekufema unobva wangochinja kuenda kunzira yekupa.
Iyo nyowani, asi inotonhorera yekunze mweya inoyerera kuburikidza neyakagadzirisa kupisa uye inotora iyo yakaunganidzwa kupisa uye hunyoro kuitira kuti tembiricha yekugovera mweya kuyerera ichaswedera kutembiricha yemukamuri. Mumasekonzi makumi matanhatu neshanu, kana regenerator yesimba ikatonhora, mweya wekufema unoshandira kumhepo yekubvisa mweya. Kutenderera kunotanga kubva pakutanga.
Iyo yekufema mweya inoitirwa kuona inoramba ichienderera michina mweya mweya mudzimba, mahofisi, mahotera, maresitorendi, dzimba dzemusangano uye dzimwe dzimba dzekugara nedzeruzhinji. Iyo yekufema inoshongedzerwa ine zvedongo kupisa exchanger iyo inogonesa kuwanikwa kwe nyowani yakanatswa mweya inopisa kuburikidza neinoburitsa mweya kupisa kumutsidzira. Iyo ventilator yakagadzirirwa iyo kuburikidza-iyo-iyo kumadziro kumisikidza uye yakarongwa yeisina-kumisa mashandiro. Mhepo inotakurwa haifanire kunge iine chero musanganiswa unopisa kana unoputika, kubuda kwemakemikari, zvinhu zvinonamira, zvinhu zvine fibrous, guruva rakakora, sosi uye mafuta zvikamu kana nharaunda dzinokodzera kuumbwa kwezvinhu zvine njodzi (zvinhu zvine chepfu, guruva, utachiona hwehutachiona).
Pashure: Yese DC Inverter VRF Yemamiriro Ekumesa System
Zvadaro: Rooftop Yakavharwa Mhepo Inodzora
Energy Kudzorera Ventilator Zvigadzirwa
Mutsva Mhepo Inopisa Exchanger
Nyowani Mhepo Ventilator Zvigadzirwa
Imwe Kamuri Energy Kudzoreredza Ventilator
Wall Energy Kudzorera Ventilator
Wall Yakakwidzwa Mhepo Mubati
Residential Energy Recovery Ventilator pamwe Int ...
Vertical Energy Kudzorera Ventilator pamwe HEPA F ...